China Agricultural Sprayer ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
I-RY3W boom sprayer ifanelekela zonke izinhlobo zogandaganda, ukusetshenziswa okuguquguqukayo, ukusebenza okulula, okuvame ukusetshenziselwa ukuqeda izifo nezinambuzane ezinambuzane, i-foliar nutrient ne-weedicide spray. Isifutho sokumisa ugandaganda silungele ukufafaza izilimo emathafeni amakhulu, futhi silenga ngemuva kukogandaganda. I-PTO drive shaft ixhuma ugandaganda nempompo yengcindezi yesifutho, kanti impompo yengcindezi iphampa umuthi endukwini yesifutho bese ufafaza ngomlomo. Ubude bezinduku zokufafaza benziwa ngezifiso ngamakhasimende.
Ibhokisi lomuthi womkhiqizo linesistimu eshukumisayo yokuphoqa ukuxubana komuthi ketshezi. Ngakho-ke, ukuhlangana kwemithi engamanzi ebhokisini lezokwelapha kufana kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Izesekeli zokuvikela kanye nebha yokuqapha ekugcineni kwengalo yesifutho ingavikela ngempumelelo umlomo wombhobho emonakalweni.
Lo mkhiqizo unomsebenzi wokufaka amanzi ngokuzenzakalela, ibhokisi lemithi lingagcwaliswa ngemizuzu engu-3, ​​kunciphise kakhulu isikhathi sokusebenza okusizayo nokwenza ngcono ukusebenza kahle komsebenzi. Izinga lokugeleza elikhulu nengcindezi ezinzile. Izingxenye ze-Spray nazo zifakwe izingxenye ezingenisiwe, umfaniswano wezinto zokufafaza, ukuvuza okuthembekile okuthembekile. Umbhobho wenziwe nge-aluminium alloy tube, kanti ibhokisi lemithi lenziwe nge-polyethylene
Yenziwe ngezinto ezilwa nokugqwala. Sebenzisa nge-PTO. Ingcindezi enkulu iqinisekisa ukuthi isitshalo sifafaza ngisho nezindawo eziphansi zamaqabunga.
Ukulawulwa kwengcindezi:Ngokulawulwa kwesistimu, umbhobho ngamunye ugcina ingcindezi efanayo. Qinisekisa ubuningi nekhwalithi yesifutho. Ngesikhathi senqubo yokufafaza, inani lezifutho lingalawulwa njengoba kudingeka.
Ukuqhuma:isisindo esincane. Akukho ukuxegisa / ukuzilinganisela ngokwakho, ukuqhuma okuqinile. Insimbi engasindi. Ukusebenza emhlabathini onzima, kungabuye kugcine isimo esizinzile nesisezingeni futhi kunikeze isifutho esilinganayo kuso sonke isivuno. Ingxenye eyinhloko ye-boom isonga ukuthuthwa okulula. Umbhobho ngamunye uhlungwa ngeshubhu epulasitiki eqinile, ibanga eliphakathi kwemibhobho lingashintshwa phakathi kwamasentimitha ayi-15 kuya kwangu-30, futhi ukuphakama kwe-boom kungalungiswa yigandaganda lokulawula u-hydraulic.
Umlomo:Yenziwe ngepulasitiki ekhethekile ehlala isikhathi eside. Ingakhiqiza amaconsi ayi-100-micron anengcindezi yamakhilogremu angama-40 nge-intshi ngayinye. Kungavimbela isifutho ukuthi singaphumi ngemuva kokumiswa kwepompo, ngaleyo ndlela kugwenywe ukungcola,
Langaphambilini Umshini Wenkungu Ephathwayo
Olandelayo: Umshini Wensimu Yezithelo Zensimu
Okunye Pump Pump